वर्षमै ३ कराेड तलब बुझ्ने नेपाली काे हुन्? – Hotpati Media
वर्षमै ३ कराेड तलब बुझ्ने नेपाली काे हुन्?
२२ पुष २०७६, मंगलवार १६:०४ मा प्रकाशित (9 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
काठमाडौं – ज्योति पाण्डे बैंकिङ क्षेत्रका सबैभन्दा महंगो व्यक्ति भएका छन् । पाण्डे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) हुन् ।सीइओ पाण्डेका लागि बैंकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३ करोड ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
जबकि अन्य कुनै पनि बैंकले सीइओका यति मोटो रकम खर्च गरेका छैनन् ।एक वर्षको अवधीमा पाण्डेको तलब सुविधा ४१ लाख रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बैंकले पाण्डेका लागि २ करोड ६५ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने २०७३/७४ मा २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षको वार्षिक विवरण अनुसार बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई १ करोड ६० लाख ७६ हजार रुपैयाँ तलब वापत दिएको छ । यस्तै १ करोड ७ लाख १७ हजार,दशैं भत्ता वापत २२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ र संचय कोषको लागि १६ लाख ८ हजार रुपैयाँ दिएको छ ।
बैंकले दिएको तलब सुविधामा कर कटाएपछि पाण्डेले सुविधा पाउँछन् ।